शुक्रबार दर्शक पाउनै गाह्रो, घट्यो विश्वास – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsशुक्रबार दर्शक पाउनै गाह्रो, घट्यो विश्वास
शुक्रबार दर्शक पाउनै गाह्रो, घट्यो विश्वास
March 29, 2019 Tulasa Karki Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- शनिबार पनि ठूला नेपाली फिल्म र नाम चलेका कलाकारको फिल्म चलेन भने के चल्छ त ? शनिबार दर्शक हलमा आएका छन् भनेर मख्ख हुनु ताजुबको कुरा होइन ।
२ दिन त नेपाली फिल्म पहिले सजिलै चल्थ्य । तर, अहिले शुक्रबार हलमा दर्शकको चाप ह्वात्तै घटेको छ । क्याप्टेन सिनेमाको प्रचार, ट्रेलर र गीतको हाइप हेर्दा जोकोहीलाई पनि लाग्थ्यो, शुक्रबार यो सिनेमाले बम्पर ओपनिङ गर्छ । तर, भइदियो उल्टो । सिनेमा हेर्न शुक्रबार त दर्शक कम आए । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा नै निराशा छाएको थियो ।
शुक्रबार नेपाली सिनेमाका स्टार कलाकारले पनि दर्शकलाई हलसम्म तान्न सकेका छैनन् । यो समस्या अहिले जटिल बन्दै गएको छ । अर्का अभिनेता प्रदिप खड्का पनि अहिले शुक्रबार हलमा दर्शक कसरी तान्न सकिन्छ भन्ने सोचमा छन् ।
शनिबार लभ स्टेशन हेर्नका लागि दर्शक हलमा आउने विश्वास उनको छ । तर, शुक्रबार नै दर्शक आएनन् भने राम्रो सन्देश नजाने कुरामा उनी पनि स्पष्ट छन् ।
आजदेखि रिलिज भएका सिनेमा साइँली र शुभ लभले मल्टिप्लेक्समा राम्रो शोज पाएका छन् । साइँलीलाई त क्यूएफएक्सले १९ शोज दिएको छ । यो त निकै नै लोभलाग्ने शोज नै हो ।
साइँलीको व्यापार र मल्टिप्लेक्समा दर्शकको चाप हेर्ने हो भने पनि त्यस्तो भयंकर छैन । शनिबार सिनेमाले राम्रो कमाई गर्न सक्ला ? तर, दयाहाङराई, गौरव पहारी लगायतका कलाकार भएको, रमाइलो ट्रेलर रहेको सिनेमाले पनि शुक्रबार दशृकलाई तान्न सकेन ।
अहिले नेपाली फिल्म बनाउनेहरु शनिबार एकदिनको व्यापारमा मात्र रमाउनुपर्ने अवस्था छ । आखिर, यो अवस्था विकराल रह्यो भने यसले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
के दर्शकलाई नेपाली फिल्मप्रतिको विश्वास कम हुँदै गएको हो । के दर्शकले नेपाली सिनेमालाई शुक्रबार विश्वास गर्न छाडेका हुन् । आखिर, शुक्रबार देखिएको यो समस्या किन र कसरी ? यो बारेमा विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
शुक्रबार नै दर्शक हलमा देखिएनन् भने त्यसले निराशा छाउँछ । एउटा स्टार कलाकारदेखि निर्देशकको सिनेमाले शुक्रबार दर्शक तान्न सक्नुपर्छ । तर, शुक्रबार अहिले दर्शकको चाप हलमा कमजोर बन्न थालेको छ । यसको मुख्यकारण, दर्शकले नेपाली सिनेमालाई पत्याउन छाड्नु नै हो ।
lates celebrity gossip
lates film gossip
पुलिसको वर्दीमा पहिलो पटक कंगना
‘लभ स्टेसन’को उपत्यका केन्द्रित प्रचार सुरु (भिडियो सहित)
April 3, 2019 sutraentertainment Gossip, Kollywood, News 0
चैत्र २२ गते देखि प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘लभ स्टेसन’ले उपत्यका केन्द्रित प्रचार सुरु गरेको छ । निर्माण टिमले काठमाडौँको गोंगबु स्थित बिजी मलको प्रांगणबाट फिल्मका कलाकारहरुको उपस्थितीमा कन्सर्ट गर्दै उपत्यका केन्द्रित प्रचार सुरु गरेको […]
धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनलाई लभ स्टेसनको सहयोग
April 4, 2019 sutraentertainment Gossip, Kollywood, News 0
चैत्र २२ गते शुक्रवारबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘लभ स्टेसन’ निर्माण टिमले धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसन मार्फत चितवनमा निर्माण हुन लागेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण सहयोगार्थ नगद रु ५०,००० सहित फिल्म प्रदर्शन पश्चात आम्दानीको […]
January 2, 2019 Tulasa Karki Feature News, Gossip, Kollywood, News 0